Programming – Page3– MYSTERY ZILLION Blog
Posted on February 27, 2010 July 3, 2010
Sql server, C# and ADO.NET (Final part)
ဒီဆွေးနွေးချက်ကို လတ်စသတ်လိုက်ရအောင်… ဒီတစ်ခါ နောက်ဆုံး data တွေကို update နဲ့delete လုပ်ကြည့်ရအောင်… form ပေါ်မှာ update နဲ့delete အတွက် button အတွက် နေရာချပြီးတာနဲ့အောက်က code တွေ ထည့်ပြီး trace လိုက်ကြည့်ပါ.. လွယ်လွယ်ကူကူပါပဲ.. ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာတော့ မရေးတော့ပါဘူး.. အရင်ပို ့စ်တွေ ဖတ်ပြီးသားဆိုရင် နားလည်ပြီးသားနေမှာပါ..
Update button အတွက် code
da.UpdateCommand = new SqlCommand("Update SAMPLE set FIRSTNAME = @FIRSTNAME, LASTNAME = @LASTNAME Where ID = @ID", conn);
da.UpdateCommand.Parameters.Add("@FIRSTNAME", SqlDbType.VarChar).Value = txtFirstName.Text;
da.UpdateCommand.Parameters.Add("@LASTNAME", SqlDbType.VarChar).Value = txtLastName.Text;
da.UpdateCommand.Parameters.Add("@ID", SqlDbType.Int).Value = da.Tables.Rows[bindsource.Position];
int x = da.UpdateCommand.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Record(s) has been updated");
Delete Button အတွက် Code
DialogResult result = MessageBox.Show("Are you sure?\_nThere is no undo once data is deleted.", "Confirm Message", MessageBoxButtons.YesNo);
da.DeleteCommand = new SqlCommand("DELETE FROM SAMPLE Where ID = @ID", conn);
da.DeleteCommand.Parameters.Add("@ID", SqlDbType.Int).Value = ds.Tables.Rows[bindsource.Position];
Posted on February 24, 2010 July 3, 2010
Sql Server, C# and ADO.NET(part 2)
ပြီးခဲ့တဲ့ part 1 မှာ Sql server ထဲကို data ထည့်သွင်းခြင်းကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်… ဒီအပိုင်းမှာ အဲဒီ့ database ကို form ပေါ်မှာ မြင်နိုင်အောင် DataGridView သုံးပြီးတော့ display လုပ်ပါမယ်.. ကဲ ကြည့်ရအောင်..
ကျနော်တို ့part 1 မှာတုန်းက Form ပေါ်မှာ Figure1_1 မှာ ပြထားသလို Sql Server ထဲကို data တွေ ထည့်သွင်းထားတယ် ဆိုပါစို ့..
အဲဒါကို Form ပေါ်မှာ display ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ ကြည့်ပါ… ပထမဆုံး Figure1_2 မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Form ပေါ်မှာ Button အသစ်တစ်ခု ထပ်ထည့်လိုက်ပါအုံး..
button’s property အနေနဲ့Name ကို btnDisplay နဲ့Text မှာ Display လို ့ပြင်ရေးလိုက်ပါ…
ပြီးရင် button ကို double click ပေးပြီး သူ ့အလုပ်လုပ်ပုံကို ရေးရအောင်..
SqlConnection conn = new SqlConnection(“Data Source=MRDREAM\_\_SQLEXPRESS;” +
“Initial Catalog=SQLSAMPLE; Integrated Security=SSPI”);
ပထမဆုံး connection ချိတ်မယ်.. ပြီးရင် dataAdapter ကို create လုပ်မယ်.. part 1 က Add Record button အလုပ်လုပ်ပုံမှာ ရှင်းပြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် ထပ် မရှင်းတော့ပါဘူး..
ADO.NET မှာ data source ထဲက data တွေဟာ dataAdapter အကူအညီနဲ့DataSet ထဲကို ရောက်ပါတယ်။ dataSet ထဲက data တွေကိုမှ Form Controls တွေပေါ် data binding လုပ်လိုက်တာပါ..
ဒါကြောင့် အခု DataSet ကို create လုပ်လိုက်ပါတယ်..
da.SelectCommand = new SqlCommand(“SELECT * FROM SAMPLE”, conn);
part 1 မှာတုန်းက sql server ထဲက database ထဲကို data တွေ ထည့်သွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်
dataAdapter.InsertCommand ကို အသုံးပြုခဲ့တာ မှတ်မိမှာပါ.. အခုက database ထဲက ဟာကို Form Controls ပေါ် တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် dataAdapter.SelectCommand နဲ့အသုံးပြုပါမယ်။
SELECT * FROM SAMPLE မှာ SAMPLE က database ရဲ့Table name၊ * ဆိုတာ Table ထဲမှာ ရှိသမျှ data အားလုံး…
DataSet ကို clear လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ ဘာအတွက်လဲ မေးစရာ ရှိပါတယ်.. သူ ့ကို clear ပေးမထားရင် data အသစ် တစ်ခု ထည့်လိုက်တာနဲ့အရင် data တွေပါ ပြန်ပြီး display ထပ်လုပ်ပါလိမ့််မယ်.. အဲလိုမဖြစ်ရအောင်လို ့ကာကွယ်ထားတာပါ.. မသိသေးသူများ ရှေ ့မှာ comment လေးပိတ်ပြီး run ကြည့်ပါ…
dataAdapter နဲ့DataSet ထဲကို data တွေ Fill ဖြည့်လိုက်တာပါ..
နောက်ဆုံး DataGridView ရဲ့DataSource ထဲကို DataSet ထဲက dataTables တွေကို ထည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် Form ရဲ့DataGridView ပေါ်မှာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်..
ခုရေးခဲ့တဲ့ Display button ရဲ့code ပါ။
ကျနော်တို့data အသစ်လေးတွေ ထပ်ထည့်ကြည့်မယ်.. Figure1_4 မှာ ကြည့်ပါ…
ဆက်ရန် (part 3)
See u around, buddy!!!
Posted on February 20, 2010 July 3, 2010
Sql Server, C# and ADO.NET (part 1)
C# နဲ့sql server အသုံးပြုပြီးတော့
* database ထဲကုုိ data တွေ ဘယ်လိုပို ့မလဲ
* database ထဲက data တွေကို form ပေါ်မှာ ဘယ်လိုပြမလဲ
* database ထဲက data တွေကို ဘယ်လို update လုပ်မလဲ
* database ထဲက data တွေကို ဘယ်လို delete လုပ်မလဲ
* BindingSource ကို ဘာအတွက် အသုံးပြုမှာလဲ
အဲဒါတွေကို အပိုင်းလိုက် ခွဲပြီးတော့ ရှင်းပြပါမယ်။
Continue reading “Sql Server, C# and ADO.NET (part 1)”
100 days with Python(Day:1-Day:10)
Programming Language တစ်ခုကိုစတင်ပြီး လေ့လာတော့မယ်ဆိုတော့ စရတာက Hello World ပေါ့။ Python ကိုဘာလို. စပြီး စိတ်ဝင်စားသလဲဆိုတော့ စင်္ကာပူမှာနေတုန်းက အားရင် Internet မှာ MIT က Course ကြည်ဖြစ်ပါတယ်။ Python ကိုစပြီး သင်ပေးပါတယ် Lecturer များကလဲ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။
Continue reading “100 days with Python(Day:1-Day:10)”